काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान प्रारम्भ हुनै लाग्दा मुलुकको होटल क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी उत्साह वर्द्धकरूपमा बढको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महीनामा ३९ ओटा पर्यटन उद्योग (होटल तथा रेष्टुराँ) मार्फत रू. ५ अर्ब ७७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको ३ महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा शतप्रतिशत लगानी वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानीतर्फ सो अवधिमा ७७ उद्योगले स्वीकृति पाएका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी ३९ ओटा पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित छन् । सेवातर्फ २५, उत्पादनका ७, सूचना प्रविधिसम्बन्धी ६ र कृषि, वन पैदावारका १ उद्योग छन् ।
ती परियोजनाका लागि रू. ११ अर्ब ३६ करोडको प्रतिबद्धता आएको विभागले जानकारी दिएको छ । यसबाट ४ हजार २९२ रोजगारी सृजना हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा रू. ४ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता विनोद खड्काले चालू आवको पहिलो ३ महीनामा उत्साहवद्र्धक रूपमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको बताए । उनका अनुसार सो अवधिमा विभागमा स्वदेशी र विदेशी गरी ८२ उद्योग दर्ता भएको छ । पर्यटनतर्फ बाहेक उत्पादनतर्फ २०, ऊर्जाका १५, सेवामूलक १२ र कृषि, वन पैदावारमा आधारित जम्मा ३ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगबाट आर्थिक प्रतिबद्धताअनुरूप रू. ४८ अर्ब ९१ करोड ३६ लाख लगानी हुन आउँछ । यसबाट ५ हजार ६१ रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य छ । विभागको आँकडाअनुसार अघिल्लो आव २०७५/७६ मा कुल रू. २३ अर्ब ६९ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
विभागको आँकडाअनुसार नेपालमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । चालू आवको पहिलो ३ महीनामा विभागमा दर्ता भएका ३९ ओटा होटल तथा रेस्टुराँमध्ये ३६ ओटा होटल तथा रेष्टुराँमा चिनियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । चिनियाँ व्यवसायीले आर्थिक रूपमा करीब रू. ७ अर्ब लगानी गर्नेछन् । यस्तै, भारतका दुई र एक जापानिज लगानीकर्ताले होटल तथा रेष्टुराँमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विभागको विवरणमा चिनियाँ लगानीका दुई तारे होटल तथा रेष्टुराँ काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालन गर्ने इच्छा देखाएका छन् । भ्रमण वर्षलाई सार्थक तुल्याउन महŒवपूर्ण पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा रहेको होटल क्षेत्रको विशेष योगदान रहन्छ । समग्रमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको विभागका निर्देशक खड्काले बताए । उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण सृजना भएको र नीतिगत सुधारका कारण पनि लगानी बढेको दाबी गरे ।
होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा लिएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएको र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । पर्यटन क्षेत्रमा आएको लगानी उत्साहवद्र्धक रहे पनि लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आधारभूत पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने खाँचो उनले औँल्याए ।
हानसँग आबद्ध पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारे होटलसम्म गरी २ हजार हाराहारीमा होटल छन् । हानका १५ क्षेत्रीय च्याप्टर छन् । ती होटलमा झण्डै ४८ हजार शैय्या रहेको व्यवसायीको दाबी छ । अहिलेकै अवस्थामा २० लाख पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले भ्रमण वर्ष मनाएर २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । रासस